Photoshop PSD Isixhobo sokubuyisela kwimeko yesiqhelo. PSD Ukulungisa isoftware. Lungisa i-Photoshop.
DataNumen PSD Repair Ingaba i eyona Ukulungiswa kweefotohop kunye nesixhobo sokubuyisela emhlabeni. Ingayilungisa iPhotohop eyonakeleyo okanye eyonakeleyo PSD kunye neefayile zePDD kunye nokufumana kwakhona idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
Ngoba DataNumen PSD Repair?
ifayile ebendiyibambile ukusukela ngo-2000. Yadalwa
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen PSD Repair v2.9
Inkxaso yokufumana kwakhona PSD kunye neefayile zePDD eziveliswa zizo zonke iinguqulelo zeAdobe Photoshop.
Inkxaso yokufumana kwakhona umfanekiso kunye neendlela ezahlukeneyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona iipekseli, ubungakanani, ubunzulu bombala kunye nephalethi yomfanekiso kunye namaleya.
Inkxaso yokufumana kwakhona imifanekiso engacinezelwanga kunye neRLE.
Inkxaso yokufumana kwakhona PSD umfanekiso ngobunzulu be-1, 8, 16, 32 amasuntswana kwisitishi ngasinye.
Inkxaso yokufumana kwakhona PSD umfanekiso kunye nemowudi yemibala ye-bitmap, i-grayscale, i-indexed, i-RGB, i-CMYK, i-mutlichannel, i-duotone, ilebhu.
Inkxaso yokulungisa PSD kunye neefayile zePDD kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, ezinjengeediski zefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibhetshi yeefayile zemifanekiso yeFotohop.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayile yomfanekiso weFotohop kunye nemenyu yokujonga yeWindows ngokulula.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye PSD kunye neefayile zePDD eziza kulungiswa kwikhompyuter yomthengi.
usebenzisa DataNumen PSD Repair Ukufumana imifanekiso eyonakeleyo yeefoto
Xa i-Photoshop yakho PSD Iifayile zemifanekiso zonakele okanye zonakele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye ngekhe uzivule ngokwesiqhelo ngeAdobe Photoshop, onokuyisebenzisa DataNumen PSD Repair ukuskena ifayile ye PSD iifayile kunye nokufumana kwakhona idatha kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala PSD ifayile nge DataNumen PSD Repair, nceda uvale iFotohop kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela kwifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo PSD ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igalelo PSD igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana PSD ifayile izakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen PSD Repair izakuskena umthombo PSD ifayile, ubuyise umfanekiso odibeneyo kunye namacwecwe, kwaye uwagcine njengeefayile zemifanekiso eyahlukileyo. Iifayile zemifanekiso efunyenweyo zikhutshelwa kulawulo olubizwa ngokuba yi-xxxx_recovered, apho i-xxxx ligama lomthombo PSD ifayile. Umzekelo, kumthombo PSD ifayile yonakele.psd, Isikhokelo esivelisayo sokukhuphela iifayile ezibuyiselweyo ziya konakaliswa_phinde zifumaneke. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen PSD Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi PSD ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo PSD ifayile inokulungiswa ngempumelelo, umfanekiso odityanisiweyo kunye namanqanaba kwi PSD ifayile iya kugcinwa kulawulo lwemveliso echaziweyo kwinyathelo 3. Kwaye uya kubona ibhokisi yemiyalezo ngolu hlobo:
Ngoku ungavula iifayile zemifanekiso efumanekayo kulawulo lwemveliso kunye nezicelo ezihambelanayo.
DataNumen PSD Repair 2.4 ikhutshwa nge-23 kaDisemba, 2020
DataNumen PSD Repair 2.2 ikhutshwa nge-6 kaNovemba ngo-2020
DataNumen PSD Repair 2.1 ikhutshwa nge-11 kaJuni, 2020
DataNumen PSD Repair 2.0 ikhutshwa ngo-Disemba 8, 2013
DataNumen PSD Repair 1.4 ikhutshwa nge-24 ka-Epreli 2008
Inkxaso epheleleyo kwiWindows Vista.
Ukulungiswa kwe-Photoshop Advanced 1.1 kukhutshwa ngo-Novemba 22, 2005
Ukulungiswa kwe-Photoshop Advanced 1.0 kukhutshwa ngoJulayi 12, 2005
Isixhobo esinamandla sokubuyisa umfanekiso weFotohop owonakeleyo (PSD, PDD) iifayile
Ukulungisa kunye nokufumana kwakhona i-AutoCAD eyonakeleyo DWG iifayile